Ukubusa kwesithiyo kanye nezimpawu zalo zomthetho | Ezezimali Zomnotho
Yini isifiso? Kushiwo inqubo yokuphoqelela noma izindlela zokuphoqelela lapho kunezinqubo ezilandelwayo ezilandelwayo nezilahla ukukhokhwa kwemali yemali.
Noma ngabe intela, izimpahla noma izinsizakalo, lokhu kwenzeka lapho i- okweletayo akakhokhile ngesikhathi esifanele njengoba kuchaziwe emazweni amabili. Kulapho izinkokhelo zingakhokhiwe ngokuzithandela kukweletwayo lapho kusetshenziswa khona umkhawulo njengenqubo lapho kuqoqwa futhi kuxazululwe isikweletu esinezimpahla zalowo okweletwayo.
1 Yini inqubo yokuphoqelela?
2 Izikhathi Zokunikeza Ukuphuthuma
3 Izici Zokuhlinzekwa Kokuphuthuma
4 Imiphumela Yokuhlinzekwa Kokuphuthuma
5 Yiziphi izizathu zokuphikisana nomyalelo wokuphoqelelwa?
6 Mayelana nokushaqwa kwempahla namalungelo
Yini inqubo yokuphoqelela?
Imvamisa Umkhokhi wentela kumele akhokhe izikweletu zakhe zentela noma intela ngesikhathi esifanele, njengalokhu kuchaziwe.
Lokhu kusho ukuthi okweletayo uzokhokha izikweletu zakhe esikhathini sokukhokha ngokuzithandela njengoba kumakwe ngu- intela eqondile noma engaqondile.
Uma kungekho ukukhokha esikhathini sokukhokha ngokuzithandela, ukudonswa kwemali nokukhula kwe- a isilinganiso senzalo sokushoda kwe- ukukhokha futhi ekugcineni kuyeza ngokuphuthuma.
Kuyaziwa njenge inqubo yokuqoqa noma inqubo kabani ukwenziwa ngenkani. Ngokusekelwa kwesihloko sokuphatha esikhishwe yile nhlangano yomphakathi futhi ngaleyo ndlela siqhubeke nokwenza ukuthi isikweletu sayo somthetho womphakathi senziwe ngokusebenza ngakunye kwempahla yomuntu okweletayo noma okweletayo.
Lesi senzo senza ukuphatha kube semthethweni ukuqhubeka nokuphikisana nempahla yomboleki okukhulunywa ngaye.
Kukhona Ukukhokhiswa kwentela okungu-20% esikweletini, ngaphezu kwalokhu, ukuhleleka kokuphuthuma kuzokhiqiza "inzalo ezenzakalelayo".
Ngenxa yokulibaziseka okunqwabelene ezinkokhelweni ze- ukhokhe isikweletu. Uma kwenzeka ukuthi isikweletu siqedwa ngaphambi kokuxhumana komyalelo wokuphoqelelwa, i- Intela ekhokhiswayo engu-20% isikweletu yehlisiwe yaya ku-10%, ngaphandle kokwenza inzalo yokukhokha sekwedlule isikhathi.
Izikhathi Zokunikeza Ukuphuthuma
Inqubo yokuphoqelela kuqala lapho ukwaziswa kumkhokhi wentela sekwenziwe kwaziwa. Kuse-oda yokuphoqelelwa lapho kutholakala khona lesi sikweletu esilindile.
Ngaphakathi amacala esikhathi sokuphatha ayaxazululwa futhi obophezelekile uyacelwa ukuba enze leyo nkokhelo okukhulunywa ngayo.
El Isikhathi sokuphatha siyaqala usuku ngemuva komnqamulajuqu wesikhathi sokukhokha ngokuzithandela.
Lapho isikhathi sokuphatha siqala, ukuphathwa kungaqala ngenqubo yokuphoqelelaKodwa-ke, ngaphambi kokuqala kufanele yazisa isenzo sokuphatha esaziwa ngokuthi "i-oda yokuphoqelela".
Kuyafana okungabhekwa njengesihloko esanele ukuqala inqubo. Umyalo wokuphoqelelwa unesisindo esifanayo namandla okuphatha njengo “isigwebo sokwahlulela”Ngakho-ke ngalokhu kungenzeka ukuthi uqhubeke uphikisana nobunikazi bomkhokhi wentela okukhulunywa ngaye.
Izici Zokuhlinzekwa Kokuphuthuma
Ngokusho kwe-LGT, izici zenqubo yokuphoqelela Yilezi ezilandelayo:
Inqubo yokuphoqelela ukuphathwa kuphela futhi kuphela. Ingxenye yokuphathwa kwentela kuphela umsebenzi wokuxazulula izehlakalo ngaphakathi kwenqubo yokuphoqelela, kanye nokuqonda icala elithile.
Mayelana nokuvumelana kwakho maqondana nalokhu nezinye izinqubo zokuphoqelela. Inqubo yokuphoqelela ayinakuhlanganiswa nezinqubo zokwahlulela noma enye inqubo ebandakanya ukushushiswa.
Ngaphakathi kokuvumelana ne izinqubo ezihlukile zokubulawa. Kulezi zimo, ukuthathwa okudala kunakho konke kuzoba okwenzelwe ukukhetha, kuleli cala elithile, ukuhambisana kwecala kuzothathwa ngosuku lokukhuthala kokuthatha.
Ngokuvumelana kwe- izinqubo zokuphoqelelwa kwendawo yonke noma ukuqothuka. Yebo, futhi kuphela uma i-oda yokuphoqelelwa inikezwe usuku ngaphambi kosuku lokumenyezelwa lokungakwazi ukukhokha imali.
Inqubo yokuphoqelela ine ukuqalwa kanye nomfutho wesikhundla kuzo zonke izinqubo zayo.
La ukumiswa kwenqubo yokuphoqelelwa kungenziwa kuphela ngaphansi kwemibono enikezwe kumthethonqubo wentela.
Kunoma yimaphi amacala ahlinzekelwe kumithethonqubo yentela.
Esimweni lapho isibophezelo sikhokha isikweletu sonke.
Uma kwenzeka kuba nephutha elibonakalayo kwisibophezelo, noma iphutha ngaphakathi kokunqunywa kwesikweletu.
Ngenxa yamaqembu esithathu. Lokhu kwenzeka lapho umuntu wesithathu efuna ukuphakamisa ukuthathwa ngoba kuqondakala ukuthi kungokwakhe kusizinda noma ukuthi, ngokuya kuMgcinimafa Kahulumeni, umuntu wesithathu okukhulunywa ngaye unelungelo lokubuyiselwa esikweletini sakhe.
Imiphumela Yokuhlinzekwa Kokuphuthuma
Lapho inqubo yokuphoqelela iqala, imiphumela ebhekiwe yilena:
Ukuphathwa kwentela okukhulunywa ngakho kungasebenzisa futhi kungasebenzisa amandla okuphatha akhona ngesikhathi senqubo yokuphoqelela. Lokhu kwenzelwa ukuqoqa isikweletu esisele, esenziwe ngokuquleka nokuphoqelelwa kweziqinisekiso. Ngokuvamile lolu hlobo lwezenzo zokuphatha alukwazi ukwenziwa ngokushesha ngemuva kokwazisa isibophezelo, kufanele kudlule isikhathi esingabhekiswa kunoma imuphi umthethonqubo.
Mayelana nesikhathi sokungena. Ngemuva kokwaziswa kwe- "ukuhlinzekwa kokuphuthuma”, Uzoba nethuba lokukhokha noma lokukhokha isikweletu. Njengoba kungalindelwa umkhokhi wentela angenza imali engenayo nganoma yisiphi isikhathi ngesikhathi sokuphatha, inqobo nje uma lokhu kwenzeka ngaphambi kwesaziso se-oda yokuphoqelela. Yize ukukhokha kungenzeka ukuthi kwenziwe, kukhona futhi umehluko wokwenza izinkokhelo ngezikhathi ezahlukahlukene, lo mehluko usezimalini ezikhokhiswayo zesikhathi sokuphatha kanye nenzalo yokubambezeleka, okumele isibophezelo kumele sikhokhelwe ngokugcwele.
Yiziphi izizathu zokuphikisana nomyalelo wokuphoqelelwa?
Kubekiwe ukuthi asikho isizathu sokuphikiswa ngaphandle kwalokhu okubalwe ngezansi ngakho-ke, ngeke kuthathwe ngokuthi isizathu sokuphikisana nokuhleleka kokuphuthumayo noma yisiphi esinye isizathu ngaphandle kwalokhu okulandelayo:
Isikweletu sikhokhwa, sicinywe sonke noma kukhona incwadi enelungelo lokufuna ukukhokhwa okufanayo.
Ukuphikiswa komyalelo wokuphoqelela kuzokwenzeka uma kwenzeka kukhona isicelo sokuhlehliswa, isinxephezelo noma ukuhlukaniswa phakathi kwesikhathi sokukhokha ngokuzithandela noma ezinye izimbangela zokumiswa kwenzeke.
Ukuphikiswa komyalelo wokuphoqelelwa kuzokwenzeka uma kwenzeka kukhona ukungabi khona kwesaziso mayelana nokukhokhwa kwezikweletu.
Ukuphikiswa komyalo wokuphoqelela kuzokwenzeka uma kwenzeka kukhanselwa ukuqedwa.
Ukuphikiswa komyalo wokuphoqelela kuzokwenzeka uma kwenzeka kukhona ukushiyeka noma iphutha kokuqukethwe okubandakanya i-oda yokuphoqelela, iphutha elifanayo noma ukushiyeka okuyisithiyo sokukhomba okweletayo noma ngaphakathi kwemingcele ukuqonda isikweletu.
Mayelana nokushaqwa kwempahla namalungelo
Ukuthathwa kufanele kufake kuphela ingxenye elingana nenani lezimpahla namalungelo ahlanganisa inani lesikweletu esingakhokhiwe, inzalo yokukhokha sekwedlule isikhathi esifanayo, imali eyengeziwe ekhokhwayo yesikhathi sokuphatha kanye nanoma yiziphi izindleko zenqubo yokuphoqelelwa.
Ngokuqondana Izimpahla noma amalungelo amanani awo adlula inani lamanani ashiwo ngenhla akufanele athathwe.
Ngaphakathi kokuhleleka kokudliwa. Kuleli oda, kusungulwa imibandela ethile enquma i-oda elandelwayo ngesikhathi sokuvinjelwa:
Isivumelwano nomkhokhi wentela okukhulunywa ngaso. Inqobo nje uma umkhokhintela ecela lokho, ukuhleleka kwenqubo yokutholwa kungashintshwa, lokhu ngaphandle kokushiya eceleni ukuthi izimpahla ezithathiwe ziqinisekisa inani nokuqoqwa, ngokusebenza kahle okufanayo futhi ngokushesha okukhulu, lokhu ngaphandle kokulimaza abantu besithathu.
Uma kungekho sivumelwano, izimpahla zizobanjwa. Ngale njongo, lezo zimpahla okulula ukuzidlulisa futhi ezingabizi kakhulu kumuntu obophezelekile zizocatshangelwa.
Ngesikhathi sokuvinjelwa, kuzokwenziwa lo oda olandelayo:
Imali noma imali efakwe ezikhungweni zezikweletu, inqobo nje uma kungokwalowo okweletayo.
Amalungelo nokuvikeleka okungatholakala esikhathini esifushane, inqobo nje uma kungaphansi kwezinyanga eziyi-6.
Amaholo okweletayo, amaholo nezimpesheni.
Izakhiwo nomuntu okweletwayo.
Izintshisekelo, imali engenayo nezithelo zalowo okweletayo.
Izindawo zezimboni nezentengiselwano zikweletayo.
Izinto zasendulo ezikweletayo, izinsimbi eziyigugu, abakhandi begolide, amatshe amahle nobucwebe.
Impahla ehambayo neyomuntu okweletayo.
Amalungelo nokuvikeleka okungatholakala esikhathini eside, leli gama libe ngaphezu kwezinyanga eziyisithupha.
Izimpahla namalungelo aziwayo kuzothathwa nge-oda elishiwo ngenhla., nokho, kukhona okuhlukile okumbili noma imithetho ekhethekile eshiwo ngezansi:
Okokugcina, lezo zimpahla ezidinga ukuphazanyiswa okudingekayo lapho kuhlala khona abakhokhi bentela zihlala, lokhu kungaba yifenisha, ubucwebe, njll. Uma nje lezi zimpahla zingaphakathi ekhaya.
Izinhlobo zempahla "ezingafinyeleleki" ngomthetho ngeke zibanjwe. Isibonelo salokhu yisikhwama sempesheni noma ithuluzi okusetshenziswa ngalo ukuhweba, ngaphezu kokubheka ingxenye engenakufinyeleleka yomholo noma iholo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Ukunikezwa kokuphuthuma